Hamafisina ny ady amin’ny fanandevozana maoderina • L'Express de Madagascar
Hamafisina ny ady amin’ny fanandevozana maoderina
Manampy an’i Madagasikara hiady amin’ny fanondranana olona sy ny fanandevozana maoderina ny Amerikanina.
Manampy an’i Mada­gasikara hiady amin’ny fanondranana olona sy ny fanandevozana maoderina amin’ny alalan’ny sampan-draharaha iraisam-pirenena ny Amerikanina.
Vola maherin’ny 750 000 dolara na 2 400 tapitrisa ariary no natolotry ny governemanta amerikanina ho an’ny sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny fifindra-monina (OIM)
ho enti-manampy an’i Mada­gasikara hiady amin’ny fanondranana olona. Anisan’ ny lafiny anankiray misongadina amin’ny hetsika atao ny ady amin’ny fanandevozana maoderina izay
nolazain’i Michelle Godette, mpiandraiki-draharaha amerikanina fa «mamparefo an’i Madagasikara».
«Tetibola hampiasain’ny OIM hanamafisana ny fandrindrana asa sy ny fiarovana ireo iharan’ny fanondranana olona eto Madagasikara ary fanenjehana ireo heloka momba izany» io vola io raha ny fanambarana avy amin’ny masoivoho amerikanina eto Madagasikara. Omena tohana sy fanampiana manokana araka izany ireo izay mametraka fitoriana, hoy hatrany ny fanambarana avy amin’ny masoivoho amerikanina.
«Hampitomboina isa ihany koa ireo rehetra misehatra eo amin’ity ady amin’ny fanandevozana maoderina ity», hoy ny talem-paritry ny OIM, Josia Ogina, izay mandalo eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, ary nihaona tamin’ny mpiandraiki-draharaha amerikanina ny
alarobia lasa teo. Fampaha­fantarana ny lanjan’ny ady sy fanentanana ny tsirairay, hatramin’ny mpianatra, handray anjara amin’ny ady amin’ny fanandevozana maoderina, no tena tanjona ao anatin’izany hetsika izany.
Amin’ny endrika maro no hisehoan’ny fanondranana olona eto Madagasikara, ary «voakasiky ny tetikasa
vatsian’ny Amerikanina vola» avokoa izy ireo. Endrika
fisehon’izany fanondranana olona sy fanandevozana maoderina izany ny fampiasana olona tsy mifanaraka amin’ny lalàna mifehy ny asa sy ny fanomezana azy karama ambany noho ny karama faran’ny ambany.
Efa miroso amin’ity ady amin’ny fanondranana olona sy fanandevozana maoderina ity ny eo anivon’ny governemanta, saingy any amin’ny fanatsarana sy fandrindrana ny fandefasana mpiasa Malagasy mankany ivelany sy any amin’ny fampiasana ankizy tsy ampy taona no efa tena iompanan’ny ady. Sampan-draha­raha iray no eo anivon’ny fiadidiana ny governemanta mba hanara-maso ny asa sy ny hetsika atao mahakasika ity ady ity. Na izany aza, mbola tsy tena tafiditra anaty kolontsain’ny Malagasy sy ny mpitondra ny miasa hanomezana tontolo mendrika sy tsara kokoa ho an’ireo mpiasa an-trano.
Tany Arzantina dia anisan’ny nifantohan-dramatoa Kirchner Cristina, filoham-pirenena tamin’ny 2007 ka hatramin’ny 2015 ny fanohanana ireo mpiasa an-trano ka nahafahan’ireto farany nisitraka fiofanana isan-tsokajiny sy nahazo fahaiza-manao. Nihatsara ny fiainan’ireo «mpiasa an-trano» ireo, satria afaka nitaky karama tsaratsara kokoa izy ireo rehefa avy nanovo fahalalana sy nampiseho ny maha-matihanina azy eo amin’ny sehatrasa misy azy.
Le MMF en ordre dispersé
La Jirama commande plus de carburants